Tetikasa Fy vary: fikarohana karazam-bary sahaza | NewsMada
Tetikasa Fy vary: fikarohana karazam-bary sahaza
Mila hamafisina ny fikarohana! Araka ny fanadihadiana, tsy ampy ny halonaky ny tany sy ny fanatsarana azy, toy ny tsy fahampian’ny zezika, ohatra, ka mahatonga ny voka-bary ho kely eto Madagasikara. Nambaran’ny tompon’andraikitry ny Fiaraha-miasa japoney (Jica) eto Madagasikara, i Umemoto Shinji, fa vonona hanampy an’i Madagasikara i Japana, hamahana izany olana izany, amin’ny maha firenena anisan’ny mpanondrana vary any ivelany azy ireo.
Misy ny tetikasa Fy vary, tohanan’ny Jica, nanomboka ny taona 2017 ary ho tapitra amin’ny taona 2022, hisahana ny fikarohana hanatsarana ny fomba fambolem-bary eto Madagasikara. Ao anatin’izany ny fikarohana mikasika ny masomboly, ny nofon-tany, ny zezika, sns. Nilaza ny tale jeneralin’ny Fambolena ao amin’ny minisitera, Ramaroson Lantonirina, omaly, fa tombanana isan-taona ny fizotran’ity Tetikasa Fy Vary ity, hijerena ny zava-bita sy hanatsarana ny ho avy. Tsikaritra nandritra ny fikarohana teo aloha fa tsy ampy faosoforo ny ankamaroan’ny nofon-tany eto Madagasikara, mahatonga ny voka-bary ho kely. Anisan’ny vahaolana hatao ny fikarohana karazana masomboly tsara sy sahaza izay karazan-tany tsy ampy faosoforo izay. Anisan’ny faritra anaovana ny fikarohana ny eto Analamanga sy ny any Vakinankaratra.
Nanamafy izany ny tompon’andraikitry ny Jica Madagasikara fa hampiharina ny valim-pikarohana ary tsy maintsy akambana ny sehatra voakasika rehetra. Nambarany koa fa hitohy hatrany ny tohana omen’ny Jica fa tsy mijanona amin’ny taona 2022.